I lezie anya, ihe ndị ụfọdụ na-eme mgbe Chukwu Abịama kechara elu n’ala, anaghịkwa emezi oge ugbua. Eleghị anya, n’ihi oke ọchịchọ na ka ahụtachaa ndị mmadụ. Ndigbo kwuru ya hoo! haa!! na ọ bụ ka ahụtachaa ka mgbọ ji atụ enwe n’isi.
Ọ bụ nke a mere na rue taa, na ụmụnwaanyị anaghịkwa arị elu, ọ kacha ndị nọ na di……
Mazị Nnaemeka Ibe
Previous Post: Erimeri ndi igbo
Next Post: Ịkpọghachite onye uwe ojii gbagburu ụmụokorọbịa Ndigbo isii n’Apọ bụ arụrụala megidere madụ nile-Ọhaneze